Nhau - interpack uye zvikamu 2021 zvakanzurwa
Mukubvumirana nevamwe vayo vanobatana mumasangano nemuindasitiri, uye nekomiti yezano yevatengesi, Messe Düsseldorf afunga kukanzura zvese zvakapindirana nezvikamu 2021, zvakarongerwa kuitika kubva 25 Kukadzi kusvika 3 Kurume, nekuda kwezvirambidzo zvine chekuita neCOBVID -19 denda.
“Musi wa25 Mbudzi, Hurumende yeFederal nenyika dzeGerman vakasarudza kuita matanho akaomarara kuGerman, uye nekukwanisa kuwedzera matanho aya mugore idzva. Izvi, zvinosuruvarisa, hazvipe chikonzero chetariro kuti mamiriro acho achavandudza zvakanyanya mukati memwedzi iri kuuya. Izvi zvinokanganisa zviitiko zvese zveMesse Düsseldorf mukota yekutanga, "akatsanangura Wolfram N. Diener, CEO weMesse Düsseldorf. "Iye zvino tava kutarisa pachirongwa chinotevera cheinterpack, chichaitika muna Chivabvu 2023 maererano nezvakarongwa, uye zvatinozowedzeredza nezvakapihwa online."
Messe Düsseldorf akange apa vatengesi vakanyoreswa mamiriro akakosha ekutora chikamu uye panguva imwechete akavapa kodzero inoshamisa yekumisa kumakambani aive asingakwanise kana kusada kutora chikamu.
"Kunze kwekusarudzika kwemusika, inopa, interpack inonyanya kuzivikanwa nekuchinjana kwakananga kweruzivo pakati pemakambani anotungamira musika uye vepamusoro vanoita sarudzo dzemazita emazita pasirese. Tinogamuchira danho raMesse Düsseldorf rekudzima interpack 2021 uye tiri kutarisa nezveinterpack 2023, ”akadaro Christian Traumann, Mutungamiri wepulpack 2021 uye Managing Director & Group President kuMultivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.
"Kune indasitiri, kusangana mumunhu-uye zviitiko zvehupenyu zvichiri zvakakosha zvakanyanya, kunyanya kana zvasvika kune tekinoroji yakaoma. Zvese izvi zvinogonesa kuenzanisa kwakananga kwemusika kuti kudhirowe uye kusimudzira mazano matsva pamwe nekutungamira kutsva uye netiweki - ichi chinhu chinowanikwa online zvigadzirwa zvinongopa muchidimbu, "akawedzera Richard Clemens, Managing Director weVDMA Chikafu Kugadzira uye Kuteedzera Mashini Association. "Tiri kutarisira kuenda kunoshanda zvakanaka muna 2023, apo indasitiri inokwanisa zvakare kuungana pamusangano wekutungamira wepasi rose muDüsseldorf."